नारीहरु हरेक ठाउँमा हेपिएका छन्ः कांग्रेस नेतृ घले | KTM Khabar
२०७५ साउन २३ गते ११:१२ मा प्रकाशित
काठमाण्डौ । लामो समय नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा विभिन्न उतार­चढाब बेहोर्दै अहिले प्रदेश सभाको सदस्य हुन सफल नेतृ हुन राधा घले । उनी काठमाण्डौ क्षेत्र नं ४ बाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्छिन । उनै प्रदेश नम्बर ३ कि कांग्रेस सांसद तथा प्रमुख सचेतक घलेसंग महिला हिंसा तथा समसामयिक राजनीतिका विषयमा केटिएम खबरका लागि रवि भट्टराईले विशेष सम्वाद गरेका छन् । पस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंशः
यहालाई स्वगत छ
केमा ब्यस्त हुनुहुन्छ ?
अहिले राजनीतिक गतिविधिमा नै ब्यस्त छु । हामी प्रदेश सभामा ऐन, नियमहरु बनाउदै छौ । त्यस्तै राजनीति गर्ने मान्छे विशेषत जनताका गुनासाहरु सुन्ने सम्बन्धित ठाउँमा आवाज उठाउने काममा नै ब्यस्त छु ।
पछिल्लो समय नारीहरु हिंशाको सिकार भएका घटनाहरु धेरै बाहिरिदै छन्, यसको कारण के जस्तो लाग्छ ?
सबैभन्दा पहिला बुज्नु पर्ने कुरो हाम्रो समाज पितृ सतात्मक समाज हो । यहाँ नारीहरु पुरुषको तुलनामा हरेक ठाउमा हेपिएका छन, दबिएका छन । पछिल्लो समय बलत्कारका घटनाहरु दिन­दिनै सुुन्नु परेको छ । यो अत्यन्तै दुखद क्रुर मानसिकताको उपज हो । यस्ता आरोपीहरुलाई हदैसम्मको कडा कारबाही हुनुपर्छ ।
हाम्रो संस्कार अनुसार यहाँ हामी नारी शक्तिलाई जस्तै लक्ष्मी भनेर पुजा गर्छौ, सरस्वति भनेर पुजा गर्छौ । बिभिन्न शक्ति स्वरुपलाई पुजा गर्छौ तर फेरी पनि नारीहरु नै हिंशाको सिकार हुन्छन् । यो सबै शिक्षा नपाएको कारण हो जस्तो लाग्छ । त्यस कारण शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ राज्यले तर अहिलेको समाजमा विकृति धेरै छ । मान्छेहरु पाप देखि डराउन छाडि सके । राम्रा संस्कारको फलो गर्न छोडिसके । त्यस कारण कुसंस्कारलाई छोडेर राम्रो संस्कारलाई अगाल्दै शिक्षालाई जोड दिनु पर्छ । राज्यको कानुन पनि फितलो छ । त्यस कारण कडा भन्दा कडा कारबाही हुने ग्यारेन्टी राज्यले दिन जरुरी छ ।
पछिल्लो समय महिला अधिकारका कुराहरु धेरै भए ३३ प्रतिशत ग्यारेन्टिको कुरा संविधान मै सुनिश्चित गरियो तर त्यो ब्यवहारमा देखिएन नी ?
राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो । हो ३३ प्रतिशतको सुनिश्चितता त भनियो तर ब्यवहारमा त्यस्तो देखिदैन । मानौ १६ जनाको कमिटि बनाईयो भने ३३ प्रतिशतमा हामीलाई सिमित गराईन्छ २ जना महिला क्यापेबल हुनुहुन्छ पुरुषको तुलनामा भने कमिटिमा नै राखिदैन । यस्तो किसिमको अवस्था छ । यो हुन हुदैन समान सहभागिता हुनपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।
समाज विचित्रको छ एक जना महिलाले छोरो जन्माउनु भएन भने उनलाई समाजका महिलाले नै लखेट्न सुरु गर्छन, यहा त महिलाको विरोध महिलाले नै गर्छन नी ?
हो यस्तो छ तर यो शिक्षाको कमिले हो । त्यस कारण महिलालाई शिक्षामा विशेष जोड दिनु पर्छ र राज्यले पनि यसलाई ध्यान दिन जरुरी छ । यो दोष न महिलाको हो, न पुरुषको हो । यो हामी भित्र रहेको पितृ सतात्मक सोचको दोष हो । यसलाई शिक्षाको ज्योती दिएर मात्रै समाधान गर्न सकिन्छ ।
तपाई त माननिय पनि हो, अब तपाईको महिला हिंशा रोकथामको लागि पहल चाही के रहन्छ नी ?
नीति निर्माण गर्ने तहमा भर्खर पुगेको छु । मैले लामो समय युवाहरुको आवाज उठाए अब नीति­निर्माण गर्ने तहमा पुगि सके पछि महिलाको अधिकारको विषयमा म आवाज उठाई नै रहने छु । जबसम्म मेरो आवाज सुनुवाई हुदैन, तबसम्म म आवाज उठाई नै रहने छु । शिक्षालाई विशेष जोड दिदै शिक्षाको ज्योति नै महिला हिंसालाई कम गर्ने आधार हो र राज्यले यो नीति लिनु पर्छ ।
तपाई अहिले माननीय हुनुहुन्छ तर तपाईलाई बनाउन त यहि समाजले बनाएको हो, तपाईले कहिल्यै आफु पिडामा परेको महसुस गर्नु भयो कि भएन ?
मैले त्यस्तो ब्यहोर्नु परेन । म भाग्यमानी रहेछु । मेरो बुवा आमा र मेरो घरमा पनि मेरो सपोर्ट नै गर्नु हुन्छ तर आम आमा, दिदि­बहिनीको पिडा सुन्दा असह्य हुन्छ । भित्रदेखि दुख्छ । एउटी चेली बलत्कृत हुन्छिन अनि पापीले मार्छ । भन्नुस त म जस्तै नारी, कसैकी छोरी, कसैकी बैनी कस्तो दर्दनाक हुुन्छ । यस्तो समाचार सुन्दा बडो पिडा हुन्छ । त्यसैले राज्यले कडा भन्दा कडा सजाए दिनु पर्छ । अनुसन्धानलाई फितलो बनाउन हुदैन ।
तपाई जनप्रतिनिधि पनि हो, बिकास निर्माणका काम चाँही के गर्दै हुनुहुन्छ नी ?
हो हामीले गरेका कमिटमेन्ट अनुसार जनताका काम गर्न भनेरै आएका हौ तर अहिले हाम्रो पार्टीको सरकार छैन । कम्युनिष्टहरुको सरकार छ । म स्पष्ट भनौ हामी योजनाहरु माग्छौ तर हामीलाई योजनाहरु खटाएर दिनु हुन्छ तर हामीले सकेसम्म जनसरोकारका विषयमा लाग्ने छौ । अहिले स्थानिय सरकार प्रदेश सरकार र केन्द्रिय सरकारमा नै राम्रो तालमेल भइनसकेको जस्तो भएको छ तर जनताको पक्षमा लाग्ने सत्ताधारी दलहरुले गरेको नराम्रा निर्णयको खबरदारी गर्ने कुरामा हामी केन्द्रित हुन्छौ ।
प्रतिपक्ष दलको नेतृ भएको हिसाबले सरकार प्रति पनि गुनासो छ कि ?
गुनासाहरु छन । सरकार एक तर्फि रुपमा संविधानलाई मिचेर हिडे जस्तो देखिन्छ । लोकतन्त्र माथि नै प्रहार गर्न खोजे जस्तो आभास हुन्छ । त्यस कारण सपना एकातिरबाट बाडेर जनतालाई ढाट्ने काममा भएको महसुस हुदैछ । लोकतन्त्रको मर्म माथि प्रहार भयो भने हामीलाई मान्य हुदैन ।
समय र संवादको लागि धन्यबाद
यहाँहरुलाई पनि धन्यवाद
नेतृ राधा घलेसंगको भिडियो कुराकानी हेर्नका लागि तलको युटुब लिंकमा जानुहोस्ः